China PLA Ọka Fiber Tea akpa emepụta na ndị na -eweta ya JIERO-GROUP
Obosara ọkọlọtọ anyị bụ 140mm na 160mm wdg. Mana anyị nwekwara ike bee ntupu n'ime obosara akpa tii dị ka arịrịọ gị si dị.
Ihe nzacha maka tii akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, tii ojii, tii ahụike, tii ahịhịa na ọgwụ ahịhịa.
PLA ihe ndị na -emebi emebi nke sitere na eriri ọka dị ka akụrụngwa na enwere ike irekasị n'ime mmiri na carbon dioxide n'ime ala nke gburugburu ebe obibi. ọ bụ ihe na -eme gburugburu ebe obibi. N'ịbụ onye na -eduga ụdị tii mba ofesi, bụrụ ihe na -ewu ewu nke nkwakọ ngwaahịa tii enweghị atụ n'ọdịnihu.
Ọ bụ nzacha akpa akpa mesh sitere na eriri polylactic, nke a na -eme chemosynthesized (polymerized) site na nsị nke lactic acid sitere na shuga osisi, nke na -enwe ọmarịcha ohere na mmiri, na -eme ka ọ dị mma dị ka ihe nzacha maka akwụkwọ tii.
Enweghị ihe na -emerụ ahụ ka achọpụtara n'ime nnwale mmiri esi esi. Na izute ụkpụrụ ịdị ọcha nri
☆ Mgbe ejiri ya, ihe nzacha ahụ nwere ike mebie biodegrade n'ime otu izu ruo otu ọnwa site na nhazi ma ọ bụ nhazi biogas, ma nwee ike tụba ya n'ime mmiri na carbon dioxide Ọ ga -emekwa biodegrade kpamkpam ma ọ bụrụ na e liri ya n'ala. Agbanyeghị, ọsọ nke irekasị dabere na okpomọkụ ala, iru mmiri, PH, na ọnụ ọgụgụ ụmụ irighiri ihe.
Ọ nweghị ọgbọ nke gas dị ize ndụ dị ka dioxin mgbe a na -agba ya ọkụ, N'otu oge ahụ, mmepụta GHG (dị ka carbon dioxide) na -erughị plastik nkịtị.
PLA ihe na -emebi emebi polylactic acid nwere ihe nje antibacterial na nguzogide mildew.
LA PLA dị ka ihe na -emebi emebi, nke ga -enye aka na mmepe obodo na -adigide.
Nke gara aga: Naịlọn triangle efu Tea akpa
Osote: Akpa akpa nylon mesh na -atụgharị na mkpado